Weather in Thailand in August ~ Journey-Assist - Fanavakavahana. Orana. Aiza no haleha
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Toetany sy toetrandro any Thailandy » Weather in Thailand tamin'ny Aogositra
Weather in Thailand tamin'ny Aogositra
Ny faran'ny fahavaratra any Thailand no rotsak'orana lehibe indrindra. Io no haingam-bokatra amin'ny vanim-potoana ambany any Thailand.
Amin'ny faritra sasany dia mahatratra 300mm ny haben'ny rotsak'orana.
Ny fepetra any amin'ny volana Aogositra
Ny mari-pana eo ho eo amin'ity volana ity dia 29 ° C., ary amin'ny hariva dia manomboka milatsaka ho 20 ° amin'ny alina.
Avy ny orana tsy tapaka isan'andro, fa ho fitsipika dia vetivety foana izy ireo ary tsy mihoatra ny adiny roa. Eny, ireo amin'ny antsasaky ny tranga dia mandalo amin'ny alina. Fa ny famoahana eto amin'ny volana Aogositra dia saika tsy mitsahatra.
Ny orana afovoan'ny orana any Thailand dia mavitrika kokoa noho ny morontsiraka.
Any Bangkok sy Ayutthaya, ary koa manerana ny faritra afovoan-firenena, dia manjaka ny toetr'andro monsoon: oram-be somary vetivety dia soloina vanim-potoana fohy, ary ny ampitson'iny dia miverimberina ny zava-drehetra. Ny tsy fitovizan'ny andro aman'alina amin'ny hafanan'ny rivotra dia tsy mihoatra ny 5-6 degre, ary ny mari-pana avo indrindra amin'ny mitatao vovonana ao Bangkok dia tsy hihoatra ny +30 degre. Ao amin'ny morontsirak'i Pattaya sy amin'ireo nosy any amin'ny morontsiraka avaratry ny Hoalan'i Thailand, tsy mihoatra ny 100 milimetatra ny oram-be dia mihena ao anatin'ny iray volana, avy ny orana mandritra ny iray herinandro eo isam-bolana. Raha tsy noho ny onjan-dranomasina avo eny an-dranomasina, dia azo inoana fa Aogositra ny safidy tsara ho an'ireo mpizahatany maniry ny fialan-tsasatra mora vidy.
Any atsimo, ivelan'ny morontsiraky ny nosy Phangan sy Samui, na dia milatsaka orana aza, dia 60 milimetatra isam-bolana ihany. Na izany aza dia mbola mikorontana ihany ny ranomasina eto amin'ity faritra ity, ary ny fahitana milamina sy ny fijanonan'ny toetr'andro dia mety hanjavona tampoka amin'ny oram-be tropikaly amin'ny rivotra mifofofofo. Ny mari-pana ao amin'ny andro dia +30 degre, ny rano ao amin'ny hanoanana dia mafana ny hafanana mitovy, +30 degre.
Amin'ny morontsiraka andrefan'ny faritany atsimo, ary koa any amin'ireo nosy Andaman, ny vanim-potoana mando dia feno tanteraka. Betsaka ny orana, feno rahona ny lanitra, ary milomano ao anaty ranomasina, raha ny fitsipika, dia foanana noho ny onja avo. Sarotra kokoa ny sary an-tsaina hoe fialantsasatra amoron-tsiraka any amin'ny nosy Phi Phi sy Lanta, ny onjan-tsambo amoron-tsiraka kosa dia avo noho ny morontsiraky ny tanànan'ny Krabi. Tsy hahagaga ny fahasamihafana ny mari-pana amin'ny haona antonony, mitovy amin'ny any amin'ny ankamaroan'ny faritra ao amin'ny firenena, eo ho eo amin'ny +30 degre.
Endrika fitsaharana amin'ny volana Aogositra
Ao amin'ny volana Aogositra, ny ivon'ny hetsika mahaliana sy fety mahaliana dia Bangkok. Toy ny onitra ho an'ny ranomasina sy ny oram-be, ny mpizahatany amin'ny faran'ny fahavaratra dia mahazo fahafahana hahafantatra tsara kokoa ny firenena mandritra ny fialantsasatra isan-karazany ary miala voly kely.
Tamin'ny faran'ny fahavaratra, ny tsenambarotra am-polony maro eto an-drenivohitra no manomboka ny vanim-potoana varotra sy ny fampihenana ny vidin'ny entana marika. Azonao atao ny misafidy akanjo sy souvenir tsy ao amin'ny toeram-pivarotana lehibe any Bangkok ihany, fa amin'ny tsenan'i Chatuchak lehibe indrindra koa, izay miasa isaky ny alahady.
Aiza kokoa ny miala sasatra any Thailandy amin'ny volana aogositra?
Ny latabatra etsy ambany dia hanampy anao hanao safidy tsara! Izy io dia manondro mari-pana amin'ny andro sy ny alina, ary koa ny rahona sy ny salanisan'ny andro orana mandritra ny volana.
Toetrandro tao Thailand nandritra ny volana maromaro